Arthdal Chronicles – Gold Channel Movies
2Season2Jun. 22, 2019
3Season3Feb. 22, 2020
Arth လို့ခေါ်တဲ့ ဒဏ္ဍာရီလာ နယ်မြေတစ်ခုက Arthdal ရှေးဟောင်းမြို့တော်သားတွေရဲ့ တန်ခိုးအာဏာယှဉ်ပြိုင်ကြရင်းက မထင်မှတ်ထားတဲ့ အချစ်နဲ့ပါယှဉ်တွဲလာရတဲ့အခါ ..
စိတ်ဝင်စားဖွယ်စိတ်ကူးယဉ်မြို့တော်တစ်ခုကိုအခြေတည်ထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲကို ဘရူနိုင်း နိုင်ငံမှာရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဓိက ဇာတ်ဆောင်အဖြစ် Jang Dong Gun , Song Joon Ki Kim Ji Won နဲ့ Kim Ok-vin တို့ပါဝင်ထားပါတယ်
ဇာတ်လမ်းပုံစံလေးက ဒီလို ??
??‍♂️Eun- Sum (Song Joong-Ki) က Arthdal မြို့တော်ကို ဘေးအန္တရာယ်တွေသယ်ဆောင်လာမယ့်သူဆိုတဲ့ နမိတ်မကောင်းသော ကြမ္မာဆိုးနက္ခတ်နဲ့ယှဉ်ပြီး မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ကလေးပါ သူ့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက် မိခင်ဖြစ်သူရဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားခဲ့ရပုံတွေကြောင့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသူပါ တစ်နေ့တော့ Arthdal မြို့တော်ဆီကို တဖန်ပြန်လည်ရောက်လာခဲ့တဲ့အခါ..
??‍♂️Ta-Gon (Jang Dong-Gun) က Arthdal ရဲ့ စစ်သူရဲကောင်းတစ်ဦးပါ သူကတော့ Arthdal မြို့တော်ကို ကြွယ်ဝအောင်မြင်တဲ့မြို့တော်တစ်ခုဖြစ်လာစေဖို့အတွက် ကျောက်စီလမ်းခင်းပေးခဲ့သူဖြစ်ပြီး Arthdal မြို့တော်ရဲ့ သြဇာအာဏာအရှိဆုံးသူပါ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကတော့ Arthdal ရဲ့ ပထမဦးဆုံးဘုရင်ဖြစ်လာဖို့ပါပဲ
??‍♀️Tan-Ya (Kim Ji-Won) က Eun Sun ရဲ့ကြမ္မာနက္ခတ်နဲ့တူညီစွာမွေးဖွားလာခဲ့ရသူပါ ဒါ့အပြင် သူမက Wahan မျိုးနွယ်စုရဲ့ဆက်ခံသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် ခက်ခဲမှုတွေကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရင်းသူမရဲ့ပန်းတိုင်ကိုသိရှိလာခဲ့ပါတယ် အမြင့်မားဆုံးဂုဏ်ထူးတွေနဲ့နေထိုင်ရှင်သန်ခဲ့တဲ့ သူမရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်လာဖို့ပါ သူမက Eun Sum ရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်သလို Ta-Gon ချစ်မြတ်နိုးရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့
??‍♀️Tae Al-ha (Kim Ok-vin ) သူမကတော့ လူသားတွေနဲ့ခြားနားလှတဲ့မျိုးနွယ် Noeantal ရဲ့နောက်ဆုံးကျန်ရှိခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး Asdal ရဲ့ပထမဆုံး ဧကရီဘုရင်မ တစ်ပါးလည်း ဖြစ်ပါတယ်
ရည်မှန်းချက် တွေ ကြမ္မာဆိုးတွေနဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေကြားက လူသား ၄ ဦး တစ်ဦးရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ တစ်ဦးနဲ့ ပန်းတိုင်တို့ ရောယှက်စပ်ဆက်နေတဲ့အခါ.. Arthdal မြို့တော်က မိမိလိုရာရရှိဖို့အတွက် တိုက်ခိုက်ယှဉ်ပြိုင်နေကြမယ့် ရင်ခုန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာ ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပါတဲ့
သဘာဝလွန်သမိုင်းကြောင်းနောက်ခံ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဒီဇာတ်ကားက KDrama ဇာတ်လမ်းတွေမှာသိပ်မမြင်ရဖူးသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေ အရိုင်းဆန်တဲ့နယ်မြေစတဲ့ ဇာတ်ကောင်သစ်တွေမြင်ရမှာလည်းဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးသား ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေဆိုတော့ ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်ကြည့်ရအောင်နော် ☺️❤️
ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့ကစပြီး အပတ်စဉ် စနေ-တနင်္ဂနွေနေ့ည ၉:၀၀ (KST) တိုင်းtvNရုပ်သံလိုင်းမှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Review credited to Kdrama Crazies Myanmar
KhinkhinmayooJune 2, 2019Reply
GC ကိုအမြဲအားပေးနေတယ် ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးထိတင်ပေးတာ GC ပဲရှိတယ်
U YeဲJune 10, 2019Reply
ဒီကားက စဆုံးလား season2ကျန်သေးလား ဗျ
gcmoviesJune 10, 2019Reply
ပြနေတုန်းပါ ၁၈ ပိုင်း ရှိပါတယ်။
TNWaiJuly 16, 2019Reply
အပိုငျး ၁၂မှာ ရပျနပွေီနျေ?
WendySeptember 1, 2019
Season3 will be aired in September.
ကျော်September 25, 2019Reply
Hanni KyawJune 2, 2019Reply
KuthiJune 2, 2019Reply
GC is the best.????
Aung Myint ThuJune 2, 2019Reply
MgBravoJune 3, 2019Reply
ဒါရိုက်တာ ရင် မကြည့်ရတာ ကြာလှပြီ။ ပျော်ထှာ 😀 😀
Nga HeinJune 3, 2019Reply
GC is the best. keep going guys thank 😀
Pyi Nyunt TheinJune 5, 2019Reply
အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အပိုင်းလေးတွေ မြန်မြန်တင်ပေးပါလားဗျာ။ စောင့်ရတာ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ အမြဲအားပေးပါတယ်။ ထာဝရ အောင်မြင်ပါစေ GOLD CHANNEL MOVIES .
ahidiceJune 6, 2019Reply
SakarwarJune 10, 2019Reply
Ep4တင်ပေးပါနော်
စ ဆုံးလား season2ကျန်သေးလား ပြောကြပါဦး
zaw win maungJune 14, 2019Reply
ep 5-6 ကdownload link မပါဘူးနော်
YeYintJune 18, 2019Reply
kzykJune 17, 2019Reply
PorzaiJune 24, 2019Reply
Ep8 က link မတွေ့ဘူးနော်
yeyintJune 24, 2019Reply
season2ကိုနှိပ်ပါ
WutyiJune 26, 2019Reply
Season2Ep-1 ခုထိဘာသာပြန်မရသေးဘူးလားဟင် GC ဘာသာပြန်တာကြိုက်လို့ CM ကတင်တာတောင် မဒေါင်းသေးပဲစောင့်နေတာကို
Season2ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ အပိုင်းတွေ ပေါ်လာပါမယ်။
HninnJuly 15, 2019Reply
HelaJune 30, 2019Reply
plz upload the drama “Moon lover:Scarlet heart Ryeo ”
SithuSeptember 20, 2019Reply
အပိုငျး 10 link down မရတော့ပါ
zinlinJuly 1, 2019Reply
nice thank bro !!
HsumyatyeeJuly 2, 2019Reply
အခုက ၁၂ ထိ ပဲရှိေ သး တာလား
thangtinlianJuly 7, 2019Reply
Myst khineJuly 7, 2019Reply
Myst khineJuly 10, 2019Reply
HninyuJuly 10, 2019Reply
Pyi Nyunt TheinJuly 14, 2019Reply
အပိုင်းတွေကျန်သေးရင် ထပ်တင်ပေးပါအုံး admin. ကျေးဇူးပါ အမြဲတမ်းအားပေးနေတယ်။ ထပ်တင်ပေးပါအုံးနော်။
[email protected]July 15, 2019Reply
part (13) က မတငျ တော့ဘူးလား
Joy Ko KoDecember 16, 2019Reply
naykhaJuly 15, 2019Reply
Hnin PwintJuly 15, 2019Reply
Waiting for Ep 13/14.
naykhaJuly 17, 2019Reply
aungthulayJuly 15, 2019Reply
13!14 က ဘာလို့မတင်တော့တာလည်း
Htet HtetJuly 16, 2019Reply
အပိုင်း ၁၃.၁၄ တင်ပေးပါအုံးရှင့်
AmsJuly 17, 2019Reply
zaw maungJuly 16, 2019Reply
အပိုင်း (၁၃)က (၉)လပိုင်းအထိ စောင့်ရမှာလား
gcmoviesJuly 16, 2019Reply
အပိုင်း ၁၃ ကို ၉ လပိုင်း ၇ ရက်နေ့မှ ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။
Pyi Nyunt TheinJuly 17, 2019Reply
ADMIN ကျေးဇူးပြုပြီး ဖြေ ပေးပါအုံးဗျာ။ ဘယ်တော့လောက် ကျန်တဲ့အပိုင်တွေ တင်ပေးမှာလည်းလို့။ တစ်နေ့တစ်နေ့ တင်ထားမလားလို့ ကြည့်ကြည့်နေရတာ မောလှပါပြီးနော်။ ခဏခဏ ၀င်ဝင်ကြည့်နေတာ။ တော်ကြာ ညားတော့မယ်ထင်တယ် gcmovies wedside link နဲ့။ တင်ပေးပါအုံးလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် Admin ရယ်။ မရက်စက်ပါနဲ့နော်။
gcmoviesJuly 17, 2019Reply
Hnin PwintJuly 17, 2019Reply
ကြေကွဲပြီပေါ့ လို့ ..ဒါဆိုလည်း အခုလာနေတဲ့ “Watcher” ongoing series လေး တင်ပေးပါအုံးလို့admin ရေ.. Request 🙂
Pyi Nyunt TheinJuly 18, 2019Reply
အခုလိုဖြေကြားပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ စောက်ရအုံးမှာပေါ့နော်။ ဇာတ်ရှိန်က တော်တော် တတ်နေပြီးဗျာ။ အမြဲတမ်း အားပေးနေတယ်နော် gcmovies။ gcmovies အဖွဲဝင်အားလုံး စိတ်၏ကျန်းမာခြင် ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်တွေ ပြည့်စုံပြီး အရင်ကထက် အောင်မြင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ moives & TV seires တွေလည်း များများ တင်ပေးနိုင်ပါစေ နော်။
DavidJuly 22, 2019Reply
admin နောက်ထွပ်တဲ့ အပိုင်းလေ ပေးဘာအုံး ၂ပတ်တောင်ရှိပြီး လုပ်ဘာအုါံ်
gcmoviesJuly 22, 2019Reply
အပိုင်း ၁၃ က ၉ လပိုင်း ၇ ရက်နေ့မှ လွှင့်မှာပါ
thazinJuly 22, 2019Reply
ng kateAugust 21, 2019Reply
wai moeAugust 25, 2019Reply
ZakiaaSeptember 5, 2019Reply
Gipcy KoKoSeptember 6, 2019Reply
Season3ကဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘာ Link မှလဲမရှိဘူး
PeaceSeptember 7, 2019Reply
အပိုင်း ၁၃ မထွက်သေးဘူးလာဗျာ…..
PeaceSeptember 8, 2019Reply
Facebook မှာ ဘယ်နာမည် နဲ့ရှာရမလဲ ပေ့အတုများနေလို့
gcmoviesSeptember 8, 2019Reply
vamsaSeptember 11, 2019Reply
Candy Su HlaingSeptember 12, 2019Reply
The Great Show လေး ဘာသာပြန် တင်ပေးပါလား ရှင့်
Pyi Nyunt TheinSeptember 16, 2019Reply
korea ဒါရိုင်တာတွေရယ် လူကို သတ်ရင်လည်း အသေသတ်ပါဗျာ။ တနုပ်နုပ်နဲ့ မသတ်ပါနဲ့ပါ။ ဇာတ်ရှိန်မြင့်နေပါတယ်ဆိုမှ ဖြတ်တောက်လိုက်ပြီး။ အ၇မ်း ကြည့်လို့ကောင်းတယ်။ ၇င်တလပ်လပ်နဲ့ ကြည့်နေရတယ်။ အဆုံးထိတောင်ကြည့်လိုက်ခြင်တော့တယ်ဗျာ။ admin တို့ရေ ကျေးဇူးပါနော်။ နောက်ပတ်နောက်ပတ် အပိုင်းသစ်တွေကို မြန်မြန်လေ တင်ပေးပါနော်။ အချိန်တွေကို ကျော်ပစ်လိုက်ခြင်တယ်ဗျာ။ တစ်ကယ် စိတ်ရင်းအမှန်ပါဗျာ။ စောက်ရတာ စိတ်မရှည်တော့ဘူး။
ShwephyuSeptember 22, 2019Reply
episode 17and 18တင်​​ပေးပါအုံး
GuySeptember 23, 2019Reply
episode 18 တင် ပါတော့
ခဏခဏ ဝင်ကြည်နေရတယ် မတင်သေးဘူး
thihaSeptember 24, 2019Reply
Pyi Nyunt TheinSeptember 24, 2019Reply
admin တို့ရေ ကျေးဇူးပြုပြီ ရှင်းပြ ပေးပါအုံးဗျာ။ ဘယ်လိုဘယ်လို episode ၁၈ ဇာတ်သိမ်းပိုင်း ပြီးသွားတာလည်း။ နောက် season456ထပ်ထွတ်အုံးမှာလား။ ဒီမှာတင် ပြီးသွားပြီးလားဗျာ။ ဆက်ရန် ရှိသေးလားဗျာ။ ဖြေ ပေးပါနော်။ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
HeinSeptember 26, 2019Reply
ep 1 to 12 FHD ကို google drive လေးပြန်စစ်ပေးပါဦး
mediafire 1 to 12 FHD ကလည်း link သေနေလို့ပါ
ep 13 to 18 FHD ကတော့ ok ပါတယ်ဗျ
YEYINTOctober 4, 2019Reply
နောက် season တွေရှိသေးတယ် BRO လာဦးမှာ နောက်နှစ်
HitsukiNovember 7, 2019Reply
ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေ ပြန် လုပ်ပေးပါဦး
Ye Lin naingOctober 5, 2019Reply
AC က ၁၈ နဲ့ ဆုံးတာလား ကျန်သေးတယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့လောက် တင်ဖြစ်မလဲဗျ သိချင်လို့ပါ။ အမြဲအားပေးနေပါတယ်။
GalsxyNovember 4, 2019Reply